Ny Fomba Fijerin’ilay Bilaogera Soedoa An’i Iran · Global Voices teny Malagasy
Ny Fomba Fijerin'ilay Bilaogera Soedoa An'i Iran
Voadika ny 16 Jona 2017 4:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, Português, English
(Marihina fa tamin'ny 05 Jona 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Bilaogera Soedoa iray i Jonathan Lundqvist izay nitsidika an'i Iran volana vitsivitsy lasa izay ary nizara ny zavatra niainany tamin'ny Global Voices tao anatin'ny antsafa. Namoaka sary maro tao amin'ny bilaoginy momba ny sivana , ny fiainana andavanandro , ny fomban-drazana, sy ny fiainana moderina ao Iran i Jonathan sady tsy hanadinony ihany koa ny hatsaran-tarehin'ilay firenena. Ireto misy sary fito izay milaza mihoatra lavitra noho ny teny an'arivony :
Mampiseho antsika ny topimaso momba ny sivana izay nitranga tao Iran ny sary roa voalohany . Nilaza i Jonathan fa ny Ivontoeran'ny Mpanao Gazety Nashravaran no sampan-draharaha izay mitantana ny sivana rehetra. Manisy hajia ny gazetiboky rehetra ihany koa izy ireo aorian'ny fanamarinana. Tena hafakely ny mieritreritra ny olona izay tsy manao afatsy ny mipetraka miaraka amin'ny penina goavam-be ary mandrakotra ny hoditra mandritra ny tontolo andro.
Ato amin'ny sary fahatelo, mila mandeha lavidavitra sy any ho any ny Iraniana rehefa mampiaraka amin'ny toerana mangina .
Mampiaraka amin'ny fomba Iraniana. Lehilahy sy vehivavy iray mipetraka eo amoron-drano mandrivodrivotra, mankafy ny resaka ifanaovany. Toy ny karazana paradisa ny tendrombohitra izay ahitana vetivety ny vehivavy tsy manao folara !
Mampiseho ny fomba hihaonan'ny marika tandrefana amin'ny akanjo tatsinanana ny sary fahefatra.
Hoy i Jonathan raha nanazava: “Hitako ity tovovavy ity niasa tao amin'ny fivarotana akanjo fanaovana amin'ny fanatanjahan-tena tany amin'ny faritra avaratr'i Tehran ary nahaliana ahy ny sary famantarana teo amin'ny voaliny .”
Mampiseho ny foibem-pivarotana elektronika, ny zaridaina tsara tarehy ao Tehran, ny tetezana mahafinaritra ao Esfahan, ary ny varavarankely feno sary sokitra Persiana ao amin'ny trano fivavahana ny sary efatra farany.